Tetikasa famokarana - BXL Creative Packaging
Cosmetics Food toaka Jewelry ditin-kazo manitra Labozia manitra
Ny BXL Creative dia mampihatra fitaovana vaovao, rafitra vaovao & teknolojia vaovao, toy ny anti-counterfeiting, 3D UV, 3D embossing, optical grating pattern, ary thermochromic inks sns, amin'ny famolavolana sy famokarana fonosana kosmetika, izay mahatonga azy io ho iray .
Mandritra izany fotoana izany dia mandray anjara lehibe koa ny fonosana miaro ny tontolo iainana. BXL dia manao asa lehibe mandanjalanja ny volavola fonosana, ny fampiasa ary ny filany eco.
BXL Creative dia manolotra fitaovam-pianarana misy sakafo, vahaolana nankatoavin'ny FDA & eco ho an'ny mpanjifa sakafo avo lenta na eto an-toerana sy any ivelany. Na dia mahatratra ny endriny fonosana mahafinaritra aza ny BXL dia tsy milefitra amin'ny ahiahy momba ny fiarovana ara-tsakafo.
Ny fonosana divay sy divay dia iray amin'ireo orinasan'ny BXL. Indrindra ho an'ny tsena anatiny China, BXL Creative dia iray amin'ireo orinasa mpamorona fonosana fanta-daza indrindra, manolotra mpanjifa amin'ny vahaolana vokatra mihodina, mandrakotra amin'ny famoronana marika vaovao tanteraka avy amin'ny fikarohana eny an-tsena, hevitra, anarana, fametrahana toerana, marketing. paikady, famolavolana bizina, famolavolana fonosana, famolavolana bokikely, sns.
Amin'izao fotoana izao, 80% amin'ireo vokatra fonosana firavaka an'ny orinasa dia aondrana any Eropa sy Amerika Avaratra. Miaraka amin'ny traikefa manankarena amin'ny asa fanondranana sy ny fitantanana tetikasa OEM & ODM, ny BXL dia afaka mamaly ny filan'ny fonosana rehetra ho an'ny mpanjifa.
BXL Creative dia manana orinasa marobe famonosana lafo vidy, izay ahosotra manitra / hanitra dia iray amin'ireo singa lehibe. Mpanjifa indrindra avy any Eropa, Amerika Avaratra, Moyen Orient, Aostralia, sns.
BXL Creative dia manana traikefa an-taonany maro amin'ny famokarana fonosana labozia manitra iraisam-pirenena, hatramin'ny nanombohan'ny orinasany iraisam-pirenena. Hatramin'izao, ny mpanjifa dia mandrakotra ny ankamaroan'ny marika malaza amin'ny indostria.
Snowflake mangatsiaka Petite
Izy io dia mety hahatratra ny famaranana ny felam-panala. Rehefa atambatra miaraka amina endrika sary izy dia afaka mamorona endrika deco tokana.
Marina kokoa sy marimarina kokoa noho ny hajia mafana mahazatra. Ity deco ity dia noforonina manokana ho an'ny tsipika kely sy mahia, teboka, litera ary lamina izay tsy vitan'ny stamp mafana. Izy io dia mety hahatratra ny famaranana tombo-kase saro-takarina amin'ny toerana tena mahomby sy marina. Manasongadina ny hanina, ny hatsaran-tarehy, ny hatsaran-tarehy, ny sosona be dia be ary ny fiangaliana ilay lamina.
Ity dingana ity dia tratra amin'ny fampifangaroana ny efijery landy amin'ny fitomboana mafana. Izy io dia mamoaka endrika deco amin'ny endriny metaly, izay manome ny patten miaraka amin'ny firafitry ny metaly fanampiana, mitondra fiatraikany amin'ny mason-tsivana sy endrika metaly 3D.
Rehefa mihaona amin'ny effet 3D ny spot UV dia manome sentra sy fiatraikany lehibe amin'ny fahitana izany.
Miteraka vokatra azo translucent, hahazoana vokatra mahery vaika.
Miaraka amin'ny tsindry hafanana, ny lamina sy ny tsipika dia ovaina eo ambonin'ny tampon'ny taratasy, manova ny lokon'ny taratasy hamorona hazavana sy alokaloka mifanohitra amin'ny lokon'ny taratasy any ambadika, izay manamafy ny firafitra sy ny fahatsapan'ny tanan'ilay fonosana.
Fametahana 3D lalina fanampiny
Ho an'ny lamina sy sary izay maniry hahatratra ny ambaratonga 3D emboss farany vita isan-tsivalana ary hamorona fiatraikany matanjaka matanjaka, BXL Creative dia azo antoka fa manamboatra azy ho anao.
Fametahana taratasy vita amin'ny taratasy hosoka mba hisolo ny marika metaly
Ny maodelin-koditra maivana miaraka amina layering concave sy convex ary ny tanana dia aondrana avy amin'ny akora tsotra mifangaro amin'ny taratasy amin'ny alàlan'ny kinova hazavana manokana mba hamokarana vokatra manan-karena, sakafo matsiro ary atiny be dia be, noho izany ny metaly metaly mahery sy ny fiatraikany amin'ny fahitana.
Volavola namboarina namboarina
Ity dingana ity dia azo amin'ny alàlan'ny embossing. Ny fisafidianana tsipika an-tsokosoko amin'ny tsipika samihafa dia azo atao amin'ny fampifanarahana. Amin'ny alàlan'ny fizotra ara-batana, ny sary dia azo tanterahina amin'ny fikorontanana sary mirefy telo refy sy ny tsipika mazava, mamokatra hatsaram-panahy, fifanoherana maranitra ary fahatsapana tsara amin'ny tanana Ny tsipika fiasan'ny tena izy dia miloko ary misy fiatraikany mafy amin'ny fahitana.